Escape the prison: free adventure game 1.95.1c Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.95.1c လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Escape the prison: free adventure game
Escape the prison: free adventure game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ထောင်ထဲမှာလွတ်မြောက်ရန်ပျော်စရာ, စွဲလမ်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်စွန့်စားမှုဂိမ်း "အခန်း Escape" ဖြစ်ပါတယ်, သင်အနီးကပ်စောင့်ကြည့် (အေး!) နှစ်အောက်အကျဉ်းသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း, ထိုအရပ်၌အစောင့်သင်တို့ပတ်လည်ဖြစ်ကြပြီးတိုင်းထွက်ပေါက်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုပိတ်ဆို့သည်တိုင်းကွန်ပျူတာကြောင့်ရပါမည်တဲ့ပဟေဠိဝှက် ဂိမ်းနှင့်အတူဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြေရှင်းရမည်။
သင်သည်များစွာသောအရာဝတ္ထုကိုတွေ့လိမ့်မည်ထောင်ထဲမှာန်းကျင်, သူတို့ကဂိမ်း၏ပဟေဠိဖြေရှင်းပေးဖို့အသုံးပြုရနိုင်သနည်း သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုအသုံးချသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ဘူး။
သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်ကိုအသုံးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာများကိုသော့ဖွင့်ဖို့, အကျဉ်းထောင် Escape တစ်ဦးစွန့်စားမှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သူအပေါင်းတို့ထက်တစ်ယုတ္တိဗေဒဂိမ်းပါ!
codes နှင့် passwords သူတို့ကိုရှာဘားနှင့်တံခါးများကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကွန်ပျူတာများမှာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစား, ပတ်လည်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားနေကြသည်။
သငျသညျဆိုင်းထားခြင်းနှင့်ပျော်စရာများအပြည့်အဝတစ်ဦးအေးမြစွဲလမ်းစွန့်စားမှုဂိမ်းမှာသင့်ရဲ့လက်ကြိုးစားကြချင်လျှင်, အကျဉ်းထောင်, အခမဲ့စွန့်စားမှုစွန့်စားမှု Escape ကြိုးစားကြ!
Escape the prison: free adventure game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Escape the prison: free adventure game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Escape the prison: free adventure game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Escape the prison: free adventure game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Escape the prison: free adventure game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.95.1c
ထုတ်လုပ်သူ Rabbit Bay Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.rabbitbaygames.com/p/privacy.html
App Name: Escape the prison: free adventure game
Release date: 2019-08-08 14:43:48
လက်မှတ် SHA1: D6:49:BC:95:70:32:46:61:42:77:98:15:1E:18:FD:D5:20:96:85:64
အဖွဲ့အစည်း (O): Rabbit Bay
Escape the prison: free adventure game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ